शरदमा ‘भिटामिन डी’ को कमी ! - Everest Dainik - News from Nepal
शरदमा ‘भिटामिन डी’ को कमी !
काठमाडौं, माघ २० । नेपाली क्रिकेट टोलीले आज मात्रै यूएई विरुद्धको टी-२० सिरिज जित्दै इतिहास रच्यो । नेपालले यो सिरिज २-१ ले जितेको हो । सिरिज जिताउन नयाँ पुराना खेलाडी सामेल थिए । सबैले राम्रो प्रदर्शन गरे । खेलमा शरद भेषवाकरको अभाव पनि खड्किएको महसुस भयो ।
नेपालले टी-२० सिरिजको शुरुका दुई खेलमा ब्याटिङ राम्रो गर्न सकेन । सायद त्यो बेला नेपाली टोलीले साेच्यो होला शरद भइदिएका भए टिकेर खेल्न सक्थे होला । फेरि अर्को दृष्टिकोण पनि छ, टिममा नयाँ र युवा खेलाडीको आगमनले शरदलाई पुनरागमन गर्न गाह्रो समेत पार्न सक्छ ।
नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खेलाडीमध्येका एक शरद खासमा बिरामीका कारण यूएई नगएका हुन् । उनमा देखिएको समस्या हो, भिटामिन ‘डी’ को कमी । त्यसैले उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् । सम्भवतः यही कारणले शरदले धनगढी प्रिमियर लिग (डीपिएल) पनि खेल्ने छैनन् ।
ट्याग्स: sharad vesawkar